पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ कार्तिक २९ गते (सन् २०२० नोभेम्बर १४ तारिख) शनिबार : ॐ शन शनिश्चराय नमः – Rastriya Yuvajagaran Nepali News
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ कार्तिक २९ गते (सन् २०२० नोभेम्बर १४ तारिख) शनिबार : ॐ शन शनिश्चराय नमः
कर्कट – भागदौड भइरहला । कठोर परिश्रमले समस्याको समाधान मिल्नेछ । नियम–कानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ला । इष्टमित्रको सहयोग प्राप्त होला । विजयश्री मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ला । ऋण रोग र शत्रुलाई उपेक्षा गर्नु उचित हुने छैन ।
कन्या – देखापरेको समस्याको समाधान मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्ला । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बलियो हुनेछ । प्रसिद्धि फैलिने छ । धन यश मान प्रशंसा बढ्ला । यात्रा होला । प्रयास र परिश्रमको मिठो फल अवश्यमेव मिल्नेछ ।
वृश्चिक – हांसविलासमा रुचि बढ्ला । कठोर परिश्रमले मनोकूलको काम बन्नेछ । वार्तामा सफलता पाउनु हुनेछ । धन सम्पत्ति बढ्नेछ तर अत्यन्तै बढि प्रयास र प्रयत्नले । विवादमा पर्नु र अरुको भरमा बस्नु उचित हुने छैन । विकासको नयाँ सम्भावना देखा पर्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ ।
मकर – अन्नधन बढ्नेछ । सुख आनन्द बढ्ला । आयस्रोत बढ्ला । रोकिएको धन प्राप्त होला । दूर देशबाट शुभ समाचार प्राप्त होला । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । मान–सम्मान बढ्नेछ । पारिवारिक सुख शान्ति बढ्नेछ ।
मीन – प्रेममा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्लान् । दूरदेशको यात्रा होला । हांसविलासमा रुचि बढ्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । यश वर्चश्वमा वृद्धि होला । ख्याति फैलिनेछ । मान पुरस्कार प्राप्त होला । आँट उत्साह बढ्नेछ
ट्याग hororscope 29 Kartik 2077 Saturday
चिकित्सा क्षेत्र सुधार अभियन्ता केसीलाई कोरोना संक्रमण, प्रधानमन्त्रीले दिए स्वास्थ्य लाभको शुभकामना